Mareykanka oo liiska Argagixisada ku daray Horjoogayaal ka tirsan Kooxda UGUS – Radio Muqdisho
Mareykanka oo liiska Argagixisada ku daray Horjoogayaal ka tirsan Kooxda UGUS
Dowladda Mareykanka ayaa liiska argagixiso ku dartay horjoogaha Ururka Gumaadka Ummadda Soomaaliyeed ee UGUS iyo horjoogayaal kale oo Al-Shabaab ka tirsan.
War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, ayaa lagu sheegay in Horjooge Axmed Diiriye oo loo yaqaano Abuu-Cubeyd uu mas’uul ka ahaa weerarro ay kooxga argagixsisada Al-Shabaab ka geysatay gudaha dalka iyo Kenya, tan iyo markii uu xilka qabtay, kaddib dilkii horjoogihii hore ee Al-Shabaab, Axmed Cabdi Aw-Godane bishii September, sannadkii hore lagu dilay duqeyn xagga cirka ah.
Mareykanku, wuxuu sheegay in horjoogahan Abuu-Cubeyda uu ku shaqeeyo mabaa’diidii Godane, isagoo xubin firfircoon ka ah Al-Qaacidda.
Mahad Karatee oo ah madaxa sirdoonka Al-Shabaab, ayaa isna liiska argagixisada lagu daray, waxayna wasaaradda arrimaha dibaddu sheegtay in uu madax u yahay kooxda Amniyaatka oo ka mas’uul aheyd weeraro kala duwan oo laga geystay Kenya iyo Soomaaliya.
Xukuumadda Washington, ayaa Al-Shabaab u aqoonsatay koox argagixiso sannadkii 2008.
9-kii bishan ayay ahayd markii Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya uu ansixiyay liiska Horjoogayaasha Al-shabaab ee madaxooda lacagaha la dul dhigay.
Wasiirada Ganacsiga iyo Shaqada oo kulan soo dhaweyn ah loogu sameeyay Dalka Kuwait “SAWIRRO”